कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण तेस्रो चरणमा पुग्यो, कस्ले मार्ला बाजी ? – Himshikharnews.com
कोरोनाविरुद्धको खोप परीक्षण तेस्रो चरणमा पुग्यो, कस्ले मार्ला बाजी ?
१२ श्रावण २०७७, सोमबार १९:५५
विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमित संख्या बढिरहँदा खोप विकासको प्रतिष्पर्धा पनि चलिरहेको छ । विश्वका एक सय २० कम्पनि तथा रिसर्च संस्थाहरुले खोपको विकास गरिरहेका छन् । विशेषगरी, अमेरिका, चीन, रुस र भारत खोपको विकासमा सफलतातर्फ बढिरहेका छन् । ती देशहरु खोप विकासमा समेत बढेका छन् ।
भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण अनुमोदन भएको छ । पुणेस्थित सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले अक्सफोर्ड भ्याक्सिनको परीक्षण अगाडि बढाउन लागेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले जनाएको छ ।
सेरमले १६ सय स्वयंसेवकहरुमा खोपको परीक्षण गर्ने भएको छ । परीक्षणका लागि तयार भएकाहरुको उमेर १८ वर्ष माथि रहनेछ ।
यसैगरी, अक्सफोर्ड र आस्ट्राजेनेकाले खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण बढाएका छन् । ती कम्पनिले अमेरिका, बेलायत र दक्षिण अफ्रिकामा पनि परीक्षण गर्ने भएका छन् ।
अमरिकाको मोर्डना कम्पनिले खोप चाँडै उत्पादन गर्ने विश्वास दिलाएको छ । सोमबारबाट तेस्रो चरणको खोप परीक्षण शुरु गर्ने भएको छ । खोप परीक्षणका लागि ३० हजार स्वयंसेवक तयार भएका छन् ।
रुसको साइबेरियन भेक्टर इन्स्टिच्युटले सोमबारबाट क्लिनिकल परीक्षण गर्ने भएको छ । रुसकै गामालेया इन्स्टिच्युट मस्कोले शुरुको चरणको खोप परीक्षण गर्ने भएको छ । यसअघि रुसकै एक कम्पनिले कोरोना भाइरसको तेस्रो चरणको परीक्षण पुरा गरिसकेको छ ।
चीनका तीनवटा कम्पनिहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको विभिन्न चरणको परीक्षण पुरा गरिसकेका छन् । चीन पनि कोरोनाविरुद्धको खोप उत्पादनमा पहिलो हुने दौडमा छ ।
विज्ञहरुले भरपर्दो खोप आउन कम्तिमा १८ महिनाको रिसर्च देखि उत्पादनसम्मको समयावधि लाग्ने बताएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि खोप विकासमा आफूलाई केन्द्रित बनाएको छ ।Reportersnepal.com